वर्षाेपछि पारस र हिमानीको यो कस्तो मिलन ?
काठमाडौं । झण्डै एक दशक लामो समयदेखि अलग बस्दै आएका पूर्व युवराज पारस शाह र पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह एकसाथ देखिएका छन् । नेपालमा राजसंस्था अन्त्य हुनुभन्दा पहिलेदेखि पारस र हिमानीको सम्बन्ध विग्रिएको बताइन्छ । यो बीचमा पारस थाइल्याण्ड बस्दै आएका थिए । राजा
छोरा नपाएको झोकमा लिंग काटेपछि…यस्तो भो !
एजेन्सी । दक्षिणी चीनमा एक व्यक्तिले आफ्नै लिंग काटेको सनसनीपूर्ण घटना सार्वजनिक भएको छ । ३६ वर्षीय पुरुषले छोराको जन्म नभएपछि आफैलाई सजाय दिँदै आफ्नो लिंग काटेका हुन् । ३ र १३ वर्षीय छोरीका बाबु समेत रहेका उनले आफ्नो लिंगको १.२ इन्च अगाडिको भाग काटेको बताइएको छ
अध्यक्षमा जितेपछि विहे गर्दै नविना लामा, को हुन् हुनेवाला पति ?
काठमाडौं । लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय नेतृ नविना लामाले विहेको तयारी गरेकी छिन् । भर्खरै एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सर्वाेच्च पद अध्यक्षमा निर्वाचित नविनाले आफ्नो एक अन्तर्वार्ताका क्रममा छिट्टै विहे गर्ने खुलाएकी हुन्
रेखा नेपाल महिला भलिबलको ‘गुडविल एम्बेसडर’
काठमाडौँ । नायिका रेखा थापा प्रधानमन्त्री कप इन्डो नेपाल महिला भलिबलको ‘गुडविल एम्वेसडर’ का रुपमा नियुक्ती भएकी छन् । बाँके जिल्ला भलिबल संघले सोमबार राजधानीमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै नायिका थापालाई प्रधानमन्त्री कप इन्डो नेपाल महिला भलिबल दुतको रुपमा
चीनमा यसरी बढ्दैछ ‘सेक्स क्रान्ति' ल पढ्नुहोस् बिस्तारमा !
एजेन्सी । चीनमा विगत २० वर्षमा सेक्स प्रतिको धारणा परिवर्तन भएको छ । चीनको पहिलो सेक्सोलोजिस्ट महिला ली यिनहीले भनेकी छन्–‘मैले १९८९ मा गरेको सर्वेक्षणमा १५.५० प्रतिशत मानिसले विवाह पहिला यौन सम्पर्क गर्ने गरेका थिए भने दुई वर्ष पहिले गरेको सर्वेक्षणमा
सेल्फी लिँदा दुईजना किशोरी नारायणीमा खसे
चितवन । सेल्फी खिच्ने चक्करमा मग्न हुँदा दुई किशोरी नारायणी नदीमा खसेका छन् । पुलमा उभिएर सेल्फी खिच्ने क्रममा आइतबार दिउँसो दुई बजे नवलपरासीको गैँडाकोटका दुई किशोरी नारायणी नदीमा खसेका हुन । सेल्फी खिच्ने क्रममा खसेका किशोरीमध्ये एकजनाको जीवितै
यात्रुको ज्यान बचाउने पाइलटलाई दागवत्ती दिँदै बाबुले भने – बाबु तिमीलाई पोल्यो कि
नेपालगन्ज । काष्ठमण्डप एयरको जहाज कालिकोटमा आकस्मिक अवतरणका क्रममा दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउने विमान चालक दिनेश न्यौपानेको आइतबार बाँकेको कम्दिस्थित राप्ती नदीको सिधिनियाघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ । ९ जना यात्रुलाई बचाएर पनि आफू बाँच्न नसकेका
यौनकार्य पछी यस्तो गरेमा गर्भ रहदैन (यौन जिज्ञासा र समाधान)
एजेन्सी । यौन सम्पर्क पछि कहिने नचाहदा नचाहदै पनि गर्भ रहन सक्छ । गर्भ निरोधक उपायहरु नअपनाउदा तथा यौन कार्यमा सावधानी नअपनाउदा गर्भ रहने संभावना रहेको हुन्छ । तसर्थ नचाहदा नचाहदै बस्ने गर्भ नियन्त्रणका लागि यौन साथिहरु मानसिक तनावमा आउने गर्दछन् । गर्भ
'हामी मरे पनि तपाईहरुलाई बचाउँछौँ ' चालकले यात्रुलाई यस्तो सावन्तना दिदै विमान अवतरण गरे - खेतमा ... तर आफै रहेनन्
काठमाडौँ । नेपालगञ्जबाट जुम्लाका लागि उडेको एयर काष्ठमण्डपको विमान कालीकोटको चिल्खाया गाविस–२ चिल्खाया गाउँमा दुर्घटना हुँदा चालकसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा परी चालक र सहचालकको मृत्यु भएको हो । उनीहरुको नाम खुल्न सकेको छैन । आज दिउँसो एक बजे
आफ्नो भावना ब्यक्त गर्न लाइकसँगसँगै अब फेसबुकमा ५ नयाँ अप्सन यस्तो छ !
काठमाडौं । यदि तपाईलाई फेसबुकको स्ट्याटसमा केवल लाइक गर्नाले तपाइको भावना प्रष्ट रुपमा ब्यक्त हुदैन जस्तो लाग्छ भने अब चिन्ता नगर्नुस । स्ट्याटसमा लाइक भन्दा धेरै भावना समेट्न फेसबुकले ५ नयाँ अप्सन ल्याएको छ । नयाँ अप्सनबाट अब खुशी, आश्चर्य, प्रेम, दुखि,
बिमान दुर्घटनामा परेर निधन भएपछी यसरी गुनगान : लगनशील विमान परिचारिका रमा
काठमाडौं । साढे तीन वर्षअघि एयर होस्टेसका रूपमा जागिरे जीवन सुरु गरेकी रमा राउत आफूसँगै भर्ना भएका अन्य बीसजना सहकर्मीका लागि सबैभन्दा मायालु र इमानदार साथी थिइन् । सहकर्मीलाई गर्ने व्यवहार, आफ्नो जिम्मेवारीप्रतिको लगनशीलता तथा परिस्थितिअनुसार आफूलाई
'अब प्रविधिबाटै हरेक अपराधको अनुसन्धान' यसरी गर्दै छ नेपाल प्रहरी !
काठमाडौं / तुलसीपुर । प्रहरी नायव महानिरीक्षक डिआइजी माधवप्रसाद नेपालले देशमा बढिरहेको अपराध प्रविधियुक्त भइरहेको भन्दै त्यसको अनुसन्धान पनि प्रविधिका माध्यमबाट भइरहेको बताएका छन्। 'अपराध जसरी हुन्छ, अनुसन्धान पनि त्यस्तै हुन्छ' उनले भने 'नेपालमा अहिले